The Indianapolis Cultural nzọ ụkwụ bụ Legacy nke Gene & Marilyn Glick. Uzo Omenala bu uzo ndi obodo mepere emepe na uzo ndi mmadu na-ejikọ ndi agbata obi, Omenala Omenala na ihe eji eme obi uto, ma na-eje ozi dika ogbe ndi mmadu n’etiti obodo Indiana. Ọ bụ ọrụ dị egwu na-amalite ịgbanye mgbọrọgwụ ebe a.
Iwuli uzo maka Map Google nwere ike itu ujo, mana Google Earth odi nfe. Can nwere ike iji toolzọ ngwá ọrụ
Nakwa, ịnwere ike ide akwụkwọ ma bulite ọkwa gị maka ndị folks iji chọpụta ha. Emebeghị m nke ahụ, mana m ga-abịa n'oge na-adịghị anya! Akụkụ mbụ nke ọrụ a bụ ịmepụta ụzọ. Otu ụzọ dị mma - M meghere ihe oyiyi nke ulturalzọ Omenala ma webata ya na Google Earth. Etinyere m ya ihe dịka pesenti 30 nke nghọta ma were ya ka ọ bụrụ nlele iji maapụ ụzọ ahụ ọsọ ọsọ.